RSWO - Fuulbana 23, 2018: Marii Obbo Jamaal Ibraahim Waliin Dhimma Finfinnee'rratti Taasifne -
RSWO – Fuulbana 23, 2018: Marii Obbo Jamaal Ibraahim Waliin Dhimma Finfinnee’rratti Taasifne
← U.S. Embassy showcases winning projects from SolveIT! Competition Ethiopia PM to IMF: Sustaining rapid growth, my utmost priority →
One thought on “RSWO – Fuulbana 23, 2018: Marii Obbo Jamaal Ibraahim Waliin Dhimma Finfinnee’rratti Taasifne”
qero September 26, 2018
Galaatomaa ibsaa ba’eef.
1. Warii Finfinee kessa jiran hundiinu wan kana balaaleefaachuu qabu.
2. Warii kana irratii hiremataniifii kana hojaataan seratii akka dhiattaan godhuu
3. Yoo didaan motumaan yoo issaan dhadaabee, qerroon qabessoo nagaa issaa kassuu danda’aa, kana immoo salphattii wan Finfinee galuuf fi ba’uu dabuun ni danda’aamaa. Kanaf ittiii gafaataaman gochaa farumaa ummaaataa oromo irraatii hojaatee dha. Kun ta’uun duraa ummaannii Finfinnee kessaa jiraatuu gochaa kana hataattaamaan balaaleefaachuu qabaa. Qeerroon Finfinnee cuqaalee affuraa baffeechuu dhowuu danda’aa, qeerroon hin caliissee malee hin rafeenee. Kanaff ittii yaddaa jedhaanii.
4. Media “far site” hin qabenee debii kenufiin hin bareebachisuu, median akkaa OMN ugaa jiruu umaataa Finfineetii himun barebachissaa dhaa, wan ESAT gaabasuuf fi dhugaa agaresisaa sobeduu akka ta’aan fii umaataaf yaddaa akka hin jiree, dantaa issaanii mallee, umaataattii agaressiisuun ni barebaachisaa.
5. Partilleen siyaasaa umaataa qophessuun, ijaaruun amaas ijaaruun ciminana ittii fuufuu qabaa jenaa.
6. Kana bodaa yaa sogidaa offii jetuu mia’ii yoo didee dhaga’aa jedhanii si gatuu jedhamaa motii ree. Yoo amalaa hin mihdagissinee Ethiopian urufaatii haffeetii, kanaf alle lamaa sadii ittii yaadaa jedhaanii ittii himaamuun barebaachissaa dhaa.